Umbukeli weTatukGIS… umbukeli omkhulu-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Umbukeli weTatukGIS… umbukeli omkhulu
Geospatial - GISezintshaUkuprinta kokuqala
Ukuza kuthi ga ngoku yenye yezona zibalaseleyo (ukuba ayingoyena ulungileyo) ababukeli beenkcukacha ze-CAD / GIS endikhe ndabona, simahla kwaye sisebenza. UTatuk ngu umgca womkhiqizo que ozelwe ePoland, nje iintsuku ezimbalwa ezedlule i-2 version ye-tatukGIS Viewer yaziswa.
Ukuba sixabisa iiprogram ezikhululekile zezinye iimveliso, kunikezelwe ukuba sibone idatha siya kufumana ubuncinane kwimiba elandelayo:
Musa ukuvula iiprojekthi ezifana: ArcView 3x apr, ArcGIS mxd
okanye ibalazwe leMaphuInfo.
Musa ukulayisha iifayile ze-V8 ze-Microsoft
Musa ukulayisha ifom ye-kml
Zibonisa ezinye iifomathi nje ngokuzifaka
Awukwazi ukugcina izicwangciso zendlela yokubeka njengezitayela
Ayikwazi ukugcinwa njengeprojekthi
Iyiphi idatha efundwa yiTatukGIS Viewer?
Xa ujonga ukusebenza kunye nokukwazi ukunxibelelana nezinye iifomathi, uyabona ukuba umbukeli uphantse waba ngumhleli weTatukGIS, ngaphandle kokuhlela kokuhlela, uhlalutyo kunye nezinye iifomathi zokufunda ezinje nge-FME ne-OGR. Mhlawumbi ngenxa yesi sizathu, iya ngaphaya koko kwenziwa ngababukeli bezinye iinkqubo ezijolise ikakhulu kwiifomathi zazo kwaye kugxilwe nje ubone kwaye uprinte.
Iifom yeVector kunye neCAD eqhelekileyo -DGN V8 (la uninzi akenzi oko)
-DWG i-2000 (apha iphosakele)
-DXF ASCII kunye nobhinqa
Iifom zeGIS -E00 ASCII kwaye ibhinari
-Vala Imephu yeSitalato
Yolwazi -ESRI isiseko sedatha
-Geomedia SQL Ukufikelela kwiWarehouse
-SQL BLOB (Iinkcukacha ezilula)
-SQL eziqhelekileyo (Izinto ezilula)
-TatukGIS SQL ibhonari
Iifomati zeRaster - abaninzi, kuquka:
WMS, MrSID, BIL / SPOT, IMG, iseva ye-ECWP esekelwe, i-ADF.
Iiprojekthi ezifundayo -ArcView 3x
-ArcGIS (kukho guqula)
Ziziphi izinto ezikhangayo unayo?
Ucoceko olucocekileyo kakhulu, ngeepaneli zecala ngakwesokudla ngesitayela asibonise equka iipropathi zezinto ezikhethiweyo, izaleko zeprojekthi, kunye nokuncitshiswa; apha ngezantsi ungalayisha iitafile zochazo kwiithebhu ezinomtsalane. Zonke zinokutsalwa njengefestile edadayo okanye zihanjiswe ngokukhululekileyo.
Ukulayisha izitya. Iziqulatho zilayishiwe, ziyabona ngendlela emangalisayo ukubonakala kweefomathi ezininzi ze-CAD / GIS, kunye izikhalazo kubhabho kwingqikelelo yokubona. Ixhasa ukubonisa, ukungafihli, ulawulo oluphezulu, i-cache kunye nezikali zokuhambisa. Unokwenza amaqela eendlela.
Izitayela ukuya kwiziqendu. Unokufaka umxholo kumaleko, zombini kuhlobo lomgca, gcwalisa, gcwalisa iphethini, iigrafu zebar, ipayi, njl. Ezi ndawo zepropathi zingagcinwa ngolwandiso lwe-.ini ukufaka isicelo kwabanye.
Iilebula. Kwipropathi yomaleko unokufaka iilebheli ezinezitayile ezinomtsalane ezinokuma okanye zibe namandla kumboniso ukuze zihambe ukuze ngelixa umaleko ubonakala ukuze zibonwe. Kubandakanya ukunikezelwa kwe-HTML.
Uncedo. Ivumela ukuba ukhethe uphawu lwetafile ebonisiweyo xa ususa imouse ngaphezulu kwento (iingcebiso) kwaye ikwabonisa ii-hyperlink ukuba zikhona kwidatha yethebhu.
Ukulinganisa. Inezixhobo zokulinganisa (akukho snap) soxande, isangqa, umendo, ipoligoni, uxande lwe-orthogonal. Ukucofa ekunene kukuvumela ukuba ukope ulungelelwaniso kwibhodi eqhotyoshwayo.
Ulwimi kunye nesitayela. Ngokucofa nje ngokulula unokukhetha ulwimi phakathi kwesiSpanish, kunye nesitayile esibonakalayo.
Impression Inomsebenzi osebenzayo wokushicilela, nokuba uthumela kuma-pdf.
Ukukhawuleza Yonke into eyenzekayo, ngekhono elimangalisa kakhulu, ndilayishe i-14 orthophotos ecw, i-16 maps of dgn, ixhunywe kwi-apr yeArcView kunye ne-11 kunye ne-Acer Aspire One ... ipane kakhulu.
Idatha yeTape. Umboniso weetafile unomdla kakhulu, kwisitayile UDig iphatha iithebhu ezongezwe ngonqakrazo olulula ukusuka kumaleko eprojekthi. Iipropathi zomhlaba zezinto ezinje ngendawo kunye nobude zibonisiwe, enye yezinto ezinomdla kukuba izinto zinokuchukunyiswa ngokukodwa kwaye zikhethe ukhetho olungabonakaliyo nokuba kungumaleko. Kukho nenani leenkqubo zokucoca, ukhetho lomntu ngamnye kunye neqela.
Gcina iphrojekthi. Le projekthi ingagcinwa, ngesitayela se-mxd / apr kunye nesandiso .ttkgp ukuze sikwazi ukuyivula kwakhona, nangona ilula ingabonakala ngathi, inokusetyenziswa yiTatukGIS Inernet Server njengenkonzo ye-ASP.NET.
Ngokuqinisekileyo ithatha indawo yayo nayiphi na into ayibonayo umbonisi wasimahla, ngesantya esifanelekileyo sokuhambisa. Okona kulungileyo, ukusebenzisana neefomathi, imigangatho kunye neeprojekthi zeenkqubo ezidumileyo (i-ESRI, i-OpenGIS, iBentley, iMapInfo, uGoogle Earth). Akulunganga simahla.
Bona ngaphezulu kwiTatukGIS Viewer
Landa iTatukGIS Viewer
Okulungileyo, okubi nokubi kwisithuba esingaphantsi kosuku
Ulwimi olunamathelayo, uhlobo lwakudala.
Le yiprojekthi yezinye izicwangciso kwaye ndayifumana kwi-tatukgis i kisiera ukwazi kom akomodar yiyiphi ibhile ngaphakathi kweebhokisi ezifunekayo ukuba ziyi-ps xa ungatsho ukuba ndiyintoni esinye isixhobo sokusebenzisa
Mongameli wam othandekayo nohloniphekileyo webhodi yabalawuli yabalandeli kunye neemanyano zabasebenzi zebhlog yeGofumadas. Ukuphendula umbuzo wakho onomdla, ndiyavuya ukuphendula ngako konke ukuthembeka kwetyala elo
hehe kufanelekile ukutsala iindlebe zakho. Mhlawumbi kancinci kancinci ndiza kufaka umxholo.
Akunjalo ukuba andithandi ukuba, kungukuthi ngokungayisebenzisi ngoku kuya kuba yinto ebonakalayo kwaye ingenanto.
Molo umdala otshayiweyo woBukumkani ...
Ndibetha ukuba ukusuka kwindawo yakho kwiwebhu ezinikezelwe kwezobuchwepheshe beenkcukacha zobume kunye nezicelo zayo ekuhloleni, i-cadastre kunye nezixhobo ezivela kwizinto ezingenayo ukujongana nezicelo zolu hlobo lusemisebenzi enjenge-TELEDETECTION. Musa ukusebenzisa i-Remote Feelings kwi-cadastre?
Impama esihlahleni evela kuSihlalo weBhodi yaBalawuli yaBalandeli beWebhu ...
… Phantsi kwetafile… ndingathanda ukuqonda njani intsingiselo yoko kwimeko yakho.
I-Geofumed kwi-fly, ngoFebhuwari 2007